KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Enti obi wɔ hɔ a ɔtie yɛn mpaebɔ?
“O mpaebɔ Tiefo, wo nkyɛn na ɔhonam nyinaa bɛba.”—Dwom 65:2.
Ebinom ka sɛ, wobɔ mpae a, ‘ɛnkɔ baabiara; ɛka wo dan mu.’ Wɔn a amanehunu ato wɔn no, ebia wɔbɛnya adwene sɛ Onyankopɔn ntie wɔn mpaebɔ.
Bible ka sɛ, “Yehowa [Nyankopɔn] ani wɔ treneefo so, na wayɛ aso ama wɔn adesrɛ; nanso Yehowa ani sã wɔn a wɔyɛ bɔne.” (1 Petro 3:12) Wei kyerɛ sɛ Onyankopɔn tie yɛn mpaebɔ. Wɔn a wɔtie Onyankopɔn asɛm paa na ɔtie wɔn mpaebɔ. Bible mu asɛm foforo nso ma yɛhu sɛ Onyankopɔn yi ne yam tie mpaebɔ. Ɛka sɛ: ‘Ahotoso a yɛwɔ wɔ ne mu ne sɛ biribiara a yɛbisa sɛnea n’apɛde te no, ɔtie yɛn.’ (1 Yohane 5:14) Enti sɛ obi pɛ sɛ Nyankopɔn tie ne mpaebɔ a, ɛsɛ sɛ ɔhu nea Nyankopɔn pɛ na wabɔ ho mpae.
Sɛn na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae?
“Sɛ worebɔ mpae a, ntĩ nsɛm koro no ara mu nka no mpɛn pii.”—Mateo 6:7.
Nyamesomfo bi te sɛ Buddhafo, Katolekfo, Hindufo, ne Nkramofo no, wɔn som kyerɛ wɔn sɛ, wɔnkyere nsɛm bi ngu wɔn tirim na wɔmfa rosary anaa atasebaa nka ho mmɔ mpae.
Yɛrebɔ mpae a, ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn yam ka yɛn akoma mu asɛm nyinaa. Ɛnsɛ sɛ yɛkyere nsɛm bi gu yɛn tirim ka kɛkɛ. Bible ka sɛ: ‘Sɛ worebɔ mpae a, ntĩ nsɛm koro no ara mu nka no mpɛn pii sɛnea amanaman mufo yɛ no, wɔsusu sɛ wɔn nsɛm dodow nti wɔbɛtie wɔn. Enti monnyɛ sɛ wɔn, ɛfiri sɛ mo Agya Onyankopɔn nim nneɛma a ɛhia mo koraa ansa na moabisa no.’—Mateo 6:7, 8.
NEA ENTI A ƐHIA
Sɛ yɛammɔ mpae sɛnea Onyankopɔn pɛ a, yɛbɛkasa agu mframa mu kwa; anhwɛ koraa a na yɛahyɛ Onyankopɔn abufuw. Bible bɔ yɛn kɔkɔ sɛ wɔn a wɔntie Nyankopɔn asɛm no, wɔn mpaebɔ yɛ “akyide.”—Mmebusɛm 28:9.
Hena na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae kyerɛ no?
‘Monhwehwɛ Yehowa Nyankopɔn bere a mobɛhu no. Momfrɛ no bere a ɔbɛn yi.’—Yesaia 55:6.
Ebinom bɔ mpae kyerɛ Maria anaa abɔfo ne wɔn a nkurɔfo frɛ wɔn “ahotefo” no. “Ahotefo” no bi ne Anthony a ɔfi Padua. Nkurɔfo kyerɛ sɛ saa Anthony yi, ɔboa nnipa “ma wɔbɛn Nyankopɔn, na wɔnya nneɛma a wɔde bɛtwitwa wɔn ho wɔ abrabɔ mu.” Baako nso ne “Ɔhotefo” Jude. Wɔkyerɛ sɛ nkurɔfo kɔ “ahokyere” mu a, ɔsɔ wɔn mu. Nnipa pii bɔ mpae kyerɛ saa “ahotefo” no ne abɔfo; wɔn adwene ne sɛ wɔbɛsrɛ ama wɔn wɔ Nyankopɔn anim.
Wɔn a wɔyɛ Kristofo paa deɛ, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mpae kyerɛ ‘yɛn Agya a ɔwɔ soro’ no. (Mateo 6:9) Bible tu yɛn fo sɛ: ‘Monnnwennwene biribiara nnhaw mo ho, na mmom momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ ne aseda so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim ade nyinaa mu.’—Filipifo 4:6.
Hwɛ nea enti a wo haw yɛ Onyankopɔn haw.
“Dɛn na Yehowa Hwehwɛ Fi Wo Hɔ?”
What does God expect from those who want to worship him? Is it possible for imperfect humans to please God?
“Monkɔ so Mmisa, na Wɔde Bɛma Mo”
Kenkan mfatoho abien bi a Yesu yɛe wɔ Luka ti 11 no, na ɛbɛma woahu nea woyɛ a Onyankopɔn betie wo mpaebɔ.
Ɛdeɛn na Bible Ka Fa Mpaebɔ Ho?